Galaas Saliid Madaxa Madaxa Weel Yar 60 mm Length | Dukaanka Madaxa ee Dragons
Bogga ugu weyn → Products → Tuubada gubanaysa saliid galaas qalooca cad 60mm dherer 10mm wadajir lab
Iibinta ugu fiican iibinta tuubo galaas gubi saliid qalooca/s-laab/swan-neck/madaxa bong/jillaab/madaxa gubi
Madaxa gubi dhererka guud 60mm
miisaanka madaxa gubta 10g
wax: galaas borosilicate oo tayo sare leh
Dhammaan cabbiraadaha madaxa gubiyuhu waa qiyaas
Muraayad gubanaysa galaas borosilicate ah ayaa ka samaysan Pyrex, oo saddex jeer ka xoog badan muraayadda caadiga ah. Dhuumahaan gubida saliida waxaa loo isticmaali karaa sigaar cabista saliidaha lagama maarmaanka ah sida basbaaska, warmaha, qorfaha, badaha iyo kuwo kale. Xitaa waxaad gelin kartaa biyo si aad u beddesho heerkulka saliidahaaga lagama maarmaanka u ah faa'iidooyin wanaagsan inta aad ku neefsanayso carafkooda. Waxay leedahay isku xirnaan lab ah oo 10mm ah sidaa darteed waa mid aad u badan oo la shaqeysa qaybo kale oo aad hore u lahaan lahayd.
Eeg ururintayada kale; dhalooyinka galaas, bongs, madax xanuun, nalalka jet -ka iyo maala si aad ula tagto madaxyadaada bong ee qiimaha badan.
Alaabta kaamil ah
Wax ha iibsan intaad kala bar marayso. Up keep order ka qor cabirka lol
Waad ku mahadsan tahay, Jackson
Qiimo aad u fiican lacag. Dirista degdegga ah iyo shay si fiican loo buuxiyey oo la ilaaliyo. Runtii aad baan ula dhacay alaab -qeybiyahaan. Adeeggoodu waa kan ugu fiican! Maxaad meel kale u raadinaysaa?
Tayo wanaagsan iyo si dhakhso ah u keen.
Waxaan haystay badeecada dhawr maalmood gudahood.
Waad ku mahadsantahay jawaab celintaada.
Kaliya waxaan ubaahanahay
Heshay amarkeygii waqtigii loogu talagalay iyada oo aan wax dhibaato ah haba yaraatee, ku faraxsan inaan kugula taliyo iibiyahaan: blush:
Waad ku mahadsan tahay, Stuart.